Ukuvumelanisa ukwenza okusemgangathweni nokwenza uphela-sonwabe | Language Centre
Ukuvumelanisa ukwenza okusemgangathweni nokwenza uphela-sonwabe
Posted on 20/11/2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news
Enye into eyenza ukuba umntu abonakale engumhleli okanye umguquli oyingcaphephe kukwazi ukuqonda ukuba ungenziwa njani owona msebenzi usemgangathweni ngexeshana nje elingephi. Kwaye ukuze kwenzeke oko kusenokufuna ukuba uthathe iindlela ezinguphela-sonwabe,hofu ezinokuba ngunobangela wokugqiba kade nezinokukuthumela kwiindawo ekungekho mfuneko yokuba uye kuzo. Koko ezo zenza ukuba iinkqubo zokubhala ngekhompyutha zibe lula zikhawuleze ngokunjalo.
Ngomhla we-15 kuSeptemba, iZiko leeLwimi labamba iwekshophu noogxa bethu abangamashumi amabini – isitafu esisigxina kunye nabazisebenzayo abasebenzela iZiko leeLwimi, bantu abo bonke abaphezu komcimbi wokwenza iiklayenti zincomeke nemibhalo yazo ngokunjalo.
UMonica Bosman, ongumsebenzi-ngeelwimi onamava noyingcali kucwangciso-mbalo uchaze indlela yokuprograma iimakro nokusebenzisa iishotkhathi zamaqhosha okuchwetheza ukuphungula ixesha lokucofwa kwamaqhosha ukuze kukhawuleziswe ukwenziwa komsebenzi, indlela yokuqinisekisa ucwangciso-mbalo olufanayo kuxwebhu, nomakwenziwe xa eziya zintlu zikhathazayo zinonjoliweyo zisuke zizinombole kwakhona okanye xa oko kubhalwe emazantsi ephepha kusuke kwanyamalala. UChris Sadie, ifiziyotherapisthi nomphembeleli wokuba iindawo zokusebenzela zibe kwimo efanelekileyo, uthe ukuba nekhompyutha emiswe kakuhle, isitulo esifanelekileyo nokumana uhamba-hamba kunokuba negalelo elincumisayo kwinkuthalo.
Kodwa ukwenza umsebenzi ophume izandla ngokukhawuleza akufuni nje ulwazi olumangalisayo lwe-MS Word nokumana kusolulwa imilenze ngokuphakama kuhanja-hanjwe. Ukuze ube uyingcaphephe ephume izandla kuthetha ukuba usoloko uwuphakamisa umgangatho ozimisele wona. Enye yeendlela zokwenza oko kukunxibelelana noogxa bakho, ukwakha ubudlelwane nokufunda kwezona ndlela zizo abazisebenzisayo. Ngoko iwekshophu eyayibanjelwe eSTIAS eStellenbosch, yayilithuba elifanelekileyo lokwakha nokomeleza uthungelwano phakathi kweengcaphephe.
Ukongeza kwiiwekshophu ekunokubhekiswa kuzo kumaxesha athile, iZiko leeLwimi lisebenzisa izikhokelo zalo ezingesimbo sokubhala isiAfrikansi nesiNgesi, iingxelo zabalawuli bekhwalithi bangaphakathi ezithunyelwa kwabazisebenzayo abonyuliweyo, izintlu zesigama kunye nobudlelwane obubodwa neeklayenti ukuncedisa ekuqinisekiseni ukubonelela rhoqo ngeenkonzo zohlelo-mbalo noguqulo ezimgangatho uphezulu. Qhagamshelana noMarguerite van der Waal ukuba unqwenela ukusebenzisa le nkonzo.
Language CentreArticles in isiXhosa Dialogos Recent newsUkuvumelanisa ukwenza okusemgangathweni nokwenza uphela-sonwabe